Bedelka Videos ka iPhone in iPad aan Lugood
Waxaa jira siyaabo dhawr ah ee files ka iPhone gudbaayo iPad. Hgoostay hab ka mid ah videos wareejinta aad u baahan tahay si ay u aqoonsadaan mid si degdeg ah oo habboon in aad. Waxaa laga yaabaa in videos on your iPhone oo aad rabto in aad iyaga la iilanin in qalab aad sida ugu noqdo. Wakhti aad rabto in aad iyaga u arkaan on your iPad tan iyo markii ay fiican daawashada iyaga qalabka this. Sidaas sida aad u gudbin doona? Arrinta aan diiradda saarno ee qodobkan waa in ay ku tusaan sida loo wareejiyo videos ka iPhone in iPad adigoo isticmaalaya DropBox, email iyo mid ka mid ah Lugood kale oo.
Part1: Sida loo wareejiyo videos ka iPhone in iPad adigoo isticmaalaya DropBox
Part2: Sida loo wareejiyo videos ka iPhone in iPad adigoo isticmaalaya email
Part3: Sida loo wareejiyo videos ka iPhone in iPad adigoo isticmaalaya Lugood kale oo
Qaybta 1aad: Sida loo wareejiyo videos ka iPhone in iPad adigoo isticmaalaya WordPress
Mid ka mid ah daruur kaydinta furan in aad isticmaali karto si ay u gudbiyaan faylasha aad sida videos waa DropBox. Qaabka noocan ah ee lagu kaydiyo waa laga heli karaa internetka si aad u kaydiso videos, waraaqaha, sawiro iyo mails. WordPress kuu ogolaanayaa inaad la wadaagto files qalabka aad beehsa sida iPhone iyo iPad gudahood. Si la bilaabi loo hubiyo in aad leedahay WordPress on qalabka macruufka aad markaas maraan talaabooyinkan
Tallaabada 1 Daahfurka DropBox ku saabsan iPhone
On suuqa kala WordPress oo ku saabsan iPhone, u tag geliyaan . Waxaad arki doontaa wax + icon jaftaa kaliya on.
Tallaabada 2 Dooro videos ku saabsan iPhone
Waa maxay soo socota waa in aad xulan videos in loo wareejin doonaa iPad. Tubada aad Photos> Videos iyo dooran gal ah inaad halkaas iyaga ka geliyaan doonaa.
Tallaabada 3 geliyaan videos ah
Ka dib markii la abuurayo gal ah, gali videos ah. Tani waxay ku urursan doonaa files ee kaydinta dalwaddii u sahli doona waxaad kala soo bixi ka iPad.
Tallaabada 4 Download videos in aad iPad
Hadda idinku soo jeesan iPad iyo furi DropBox ah. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad bixisaa waxay mararka qaar in la uploaded hor degsado videos on your iPad. On aad iPad videos wuxuu diyaar u download noqon doonaa. Riix galka abuuray iyo badbaadin videos on your iPad.
Qeybta 2: Sidee si ay u gudbiyaan videos ka iPhone in iPad adigoo isticmaalaya email
Email u ogolaanaya mid baaq loo diro elektaroonik ah oo laydinku Arzaaqo ku xiran yihiin shabakad isgaarsiinta ah. Waa in aad cinwaanka mail ah inay awoodi karaan inay ku xirmaan kuwa kale ee isticmaala. Haddii aanad haysan mid ka mid ah waa in aad iska diiwaan online. Si aad u awoodo inaad la wadaagto files dhaxeeya iPhone iyo iPad loo hubiyo in aad ku rakibtay app email ah oo ku saabsan labada qalabka macruufka.
Tallaabada 1 Open email on your iPhone
Hubi mail app aad iPhone iyo iPad. Hubi in aad email u shaqaynayo.
Tallaabada 2 Open videos ah in loo wareejiyo
Tubada on Photo app aad iPhone. Hadda ka jaftaa on video ah lagu wareejiyo iPad iyo guji Share button iyo dooran Mail doorasho.
Tallaabada 3 Dooro qaataha ah iyo in la abuuro fariin email ah oo
Ka dib markii doorashada qaataha oo aad yahay, cinwaanka email qor. Waxaad dooran kartaa inaad ku qor fariin haddii aad jeclaan lahayd in aad sidaas samayso. Waxaa Nooca on fariin qoraal ah qayb ka koobanahay ah. Marka aad samaysay qasabadda ku dir.
Tallaabada 4 Open email ah ee aad iPad iyo badbaadin videos
Your iPad heli doontaa fariin this. Fur Waxyiga, waxayna ka jaftaa ku Send video oo u badbaadin. DeMerit A ee habkan waa in aadan soo diri kartaa waaweyn videos waqti.
Qeybta 3: Sida loo wareejiyo videos ka iPhone in iPad adigoo isticmaalaya Lugood kale oo
Ma ogtahay in aad ka iPhone wareejin karaan videos in iPad aan la isticmaalayo Lugood? Waxaa jira tartan cutthroat horumarinta ee Chine kala iibsiga. Mid ka mid ah fursad kale oo aad u isticmaali karto waa Wondershare Gurtida Tag.
Tan kale Lugood wareejin karaan Dufcaddii ah videos dhexeeya iPad, iPhone iyo iPad si ammaan ah iyagoo sii haystay tayada videos. Waxa kale oo ay u maarayn doonaan maktabadda warbaahinta aad. Waxaad app this website-ka rasmiga ah ee Wondershare ka heli kartaa. Waxaa jira version a free raad inkastoo weli waxaad ka iibsan kartaa.
Halkan waa hage ah oo ku saabsan sida loo isticmaalo.
Tallaabada 1 Download iyo abuurtaan app
Codsigan taageertaa macruufka ah 5 ilaa macruufka 9. Sidaa darteed loo hubiyo in qalabka aad u dhexeeya nidaamyadan.
Tallaabada 2 xidha laba qalabka la isticmaalayo cable USB
Xir aad iPhone in iPad iyo ordi Go Wondershare Gurtida ah.
Videos Tallaabada 3 Transfer in aad iPhone
On shaashadda codsiga aad aad iPhone. Riix Media markaas Movies . Waxay muujin doonaa oo dhan videos ka. Dooro iyaga oo guji dhoofinta. Markaas dooran iPad loo ahaado.
Bedelan karo More for Lugood waxaad ka heli kartaa halkan: http://www.wondershare.com/itunes/free-alternatives-to-itunes.html
> Resource > Transfer > 3 Siyaabaha Bedelka Videos ka Your iPhone in iPad aan Lugood